I-Semalt: Amathiphu Okuthi Ungakuhlunga kanjani I-Traffic Yangaphakathi Evela ku-Google Analytics
Bewazi ukuthi ukuhambela kwakho, okuvame ukubizwa ngokuthi i-traffic yangaphakathi kungathinta izibalo ze-Google Analytics? Phakathi nezinyathelo zokuqala zomkhankaso wakho, imisebenzi yakho ivame ukuphazamisa imibiko yakho njengoba amawebhusayithi akho athola imoto encane ngaleso sikhathi. I-traffic yangaphakathi ayithinti kuphela inani lokuvakashelwa elirekhodiwe ku-Google Analytics, kodwa futhi isikhathi esilinganisiwe esichithwa yizivakashi kusayithi lakho, izinga lokunciphisa, kanye neminye imingcele ebalulekile.
Amanye amathuluzi abekwe phambili ukulandelela ukuvakashelwa kwakho kwansuku zonke kanye nomgwaqo owenziwe ngemingcele yangaphakathi. Kodwa-ke, indlela ngayinye ye-metric iqukethe ukufaneleka nokulahlekelwa phansi. I-Google Analytics isiza abathengisi ukulandelela phansi ithrafikhi eyenziwe ukuvakashelwa kwangaphakathi. Ukulinganisa kokubili ukuhamba ngaphakathi nangaphandle kuyadingeka ukuba nomkhankaso ophumelelayo ngokuhamba kwesikhathi.
U-Frank Abagnale, i- Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwamakhasimende, unikeza uhlu lwezindlela ezizokusiza ukuba ukhethe indlela engcono kakhulu eyomukela umkhankaso wakho, nokuthi ungayisebenzisa kanjani.
Isici sokuhlunga i-Google Analytics
Lokhu kungenye yezici ezisetshenziselwa ukuhlunga izizinda, izihloko zekhasi, namakheli e-IP. Ukuhlunga isizinda somthombo kanye nekheli le-IP kuthathwa njengesinqumo esihle sokuvimbela ukuhambela kwangaphakathi kwakho okuthinta imibiko yakho nezibalo zakho. Isici sokuhlunga sivumela abathengisi bokuqukethwe nabanikazi bewebhusayithi ukukhipha zonke izici ezihlobene nemvelo yangaphakathi.
Ngokusho kochwepheshe, ithuluzi lokuhlunga le-Google Analytics livimbela igciwane le-Trojan kanye ne-malware ekukhiqizeni ithrekhi engalungile..
Izinzuzo Nezinkinga Zokusebenzisa Isici sokuhlunga
Ithuluzi lokuhlunga le-Google Analytics livumela abathengisi ukuthi babe nokulawula okugcwele imisebenzi yewebhu. Futhi, ithuluzi linikeza izixazululo nezimo ezinokwethenjelwa. Ngakolunye uhlangothi, ithuluzi lokuhlunga le-Google alikhuthazwa izinhlangano ezincane nezinkampani.
i-Google Analytics Cookie ekhethekile
Leli thuluzi eliwusizo lihlukanisa ithrafikhi langaphakathi nangaphandle. Ngokuhamba kwesikhathi, ivimba ithrafikhi yangaphakathi ekulawuleni imibiko yakho.
Kunconywe izinhlangano ezincane
Inikeza izixazululo eziguquguqukayo nezilula
Akufanelekele izinhlangano ezinkulu.
Kubiza kakhulu ngenxa yezindleko ezenziwa ngabaqeqeshi bokukhokhela
I-Side Side Method
Ngokuvame ukubizwa ngokuthi indlela ye-backend, indlela yecala leseva ivumela abanikazi bewebhu ukuba bahlele amaseva wabo. Ngokwenza kanjalo, ikhodi yokulandelela ye-traffic yangaphakathi, i-malware, ne-Trojan virus ivinjelwe ekubhalweni phansi kwezibalo.
Kucatshangwa njengendlela yokuphepha ephephile futhi enokwethenjelwa
Ivumela abadayisi ukuba basebenzise kokubili amakheli e-IP ashukumisayo futhi ahleliwe
Elula kuzo zonke iziphequluli
Awuhambisani nokubuyisela okuqhubekayo ohlelweni lokugcinwa kwekhompiyutha ngezinguquko eziphephile zekhasi elivakashelwe.
Uma kuziwa ekukhangiseni, ukudala ithrafikhi nokukhuthaza ukubandakanya kwabasebenzisi kubaluleke kakhulu. Kodwa-ke, ithrafikhi eyenziwe ngaphakathi kwendawo yangaphakathi ihlose ukuphazamisa imibiko nezibalo ngokungahambisani nemigomo yokusebenza. Amathuluzi namasu axoxwe ngenhla azokusiza ukuthi ususe futhi ukhawule umgwaqo wangaphakathi ungathinti umbiko wakho we-Google Analytics. Ngemuva kokuhlunga i-traffic eyenziwa ehhovisi lakho, cabanga ngokufeza izinguquko ngokuphumelelayo.